Madụ̀ - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
(Dupụ̀rụ̀ sì Mádu)
Mádu nwóké na nwányị
Mádu bu òdùdù enyï anúmanụ àlà nwẹrẹ ómárí káchárá anumanu nke níle. Na asụsụ Latin há kpòrò madu Homo Sapien bú "onye ómárí" ma "onye ma ihe". Há bu ndi nọr na òdùdù nke Homo nke énwè nẹ jé na úkwú abụo na Hominidae, umunna énwè úkwú. Máná ọ di mgbe "Human" na asụsụ bekee na kárá genus nke Homo.
Madu nwèrè ọvúrù kachara a ka, nke nweríkí nwe ómárí nke nché échìchè, asụsụ, ómárí onwé, na Í nweríkí bì nsogbu. Ọ dị Í nwé íshí nka, tírí ya na ahú kwụrụ ọtọ na élú nke nyéré íke Í me ka áká rü, mèrè ka madu gáfe na ihü òdùdù enyï nke ndi ozọr na Í jí ihe ọrü a rü. DNA Mitochondrial na ánumanu ichie di nà àlà zịrị na madu ndi ohüru shì Afrika na afọr 200,000 gárá agá. Nwéré madu gbásaa na uwa nílé ma ha dighị na Antarktika, madu bu òdùdù enyï nke uwà na uwà. Na Önwa ise nke 2010, mádu rùrù nke há sí bu ijeri 6.8.
Dí ka enwè nke íshí íshí, madu di ónór na òrà nke ná kpátá madu ndi ọzór. Mànà, madu gbàrà ọkpúkpú màkà ha nweríkí kwú màkà ihe nọr ha na óbị, Í gbanwò ómárí na Í dósé ihe. Madu ne ké òrà di na iche iche nwéré ọtú iche iche na gbálílí ndi ozor, na ndiá nẹ shí umunna rüo na mbà. Imẹ na òrà nke ndi madu ne mẹ bu ihe hé kèrè, yá nà ómárí ihe bu ihe ómá na ihe ọjọó, ihe bu ébéanọr na ñkitị, na ihe ọmemmé, iheá nílé gbakotàrà Í bu uwà mádu.
Há sị madu chọrọ Í má na Í nwe àgbà na uwà há, né tú ọtù ha shi é kọwa na í rü na élú ihe àlà shí ọbià, ílúnílú, ihe mmuö na éféfé. Ihe nọr na íshí ha nke nchọnchó mèrè ka ha ganírú na Í kw ihe orü na Í rümarü, nke na da na umunna; madu bu ótụ anúmanụ nke nwéré ómárí Í fụnwu ọkụ, Í shí ihe orị, Í tí uwé, na technonzu ndi ozọr.
Édémédé nke dị ntakiri. Nye Wikipedia áká Í me kọ sáasa.
Ewepụtara na https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Madụ̀&oldid=62109
Édémédé mkpu mkpu
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 13 Ọnwa ise 2018, mgbe 06:53